Olole Nadaafadeed oo Ka Bilowday Xaafada Islii “Sawirro” – Radio Muqdisho
Xili dhawaan shacabka ku dhaqan Xaafada ay soomalidu degto ee islii ay isugu soo baxeen dibad bax ay kaga cabanayeen nadafad darro baahsan oo ka jirta degmada KamuKunji,dhaliilana ay u soo jeediyeen dowlada hoose ee Naiorbi ayaa waxaa maanta xaafada islii ka bilowday olole nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda xaafada islii ee magalada nairobi.
Ololahani nadaafadeed oo dowlada hoose ee Nairobi ay ka fulinaysay xaafada islii ayaa waxaa ka qeyb qaadanayay ganacsatada iyo shacabka ku dhaqan xaafada islii,iyadoo la arkayay gaadiid ka qeyb qaadanayay ololahan nadaafadeed.
Xubno ka tirsan gudiga ganacsatada iyo mas’uuliyiinta degmada Kamukunji oo horkacayay ololahan nadafadeed ayaa waxay ka warbixiyeen ololaha nadaafadeed ee lagu soo celinayo bilicda xaafada Islii.
“Sabtigii markan mudaharadnay isniintii shirbaa naloogu yeeray,waxaa noo yeeray gudoomiyaha gobolka Nairobi Evans Kidero,wuxuna noo balan qaaday in xaafada si weyn loo nadiifin doono,lana keeni doono labo baabuur oo xaafada si toos ah uga shaqeyn doonto,dadka qashinka ku daadinayana talaabo weyn laga qaado”Ayuu yiri Axmed Security oo kamid ahaa mas’uuliyiintii goobta ka hadashay.
“Anaguna waxay naga codsadeen hadan nahay Gudiga ganacsatada inan dadkeena wacyi gelino meelaha loogu talo galayna ay qashinka geeyaan,dhalinyarada lacagta yar la siinayo oo qashinka loo dhiibayo la joojiyo,buubuur ay keenaan qashinka lagu qaado intii loo dhiibi lahaa dhalinyaro aan meel dheer gaarsiineyn”Ayuu yiri Cumar Axmed oo ka tirsan gudiga ganacsatada ee xaafada Islii.
“Maanta waxay muujiyeen soomalidu inay u soo jeesteen nadiifinta xaafadoda,waana farxad aad u weyn marka waxan ku gubaabinayaa in horta laga fikiro sidii loo hubin lahaa in qashinkan uu qof waliba ka qaadayo gurigiisa oo uu lacagta ku bixinayo loo geyn lahaa meeshiii loogu talo galay in la geeyo”Ayuu yiri Xuseen Aar oo ka tirsan mas’uuliyiinta gudiga ganacsatada ee xaafada Islii.
Wasiirka Deegaanka iyo Tamarta ee dowlada hoose ee Nairobi mr Odiek ayaa intii uu socday ololaha nadaafadeed waxa uu soo gaaray goobaha ay ka socdeen howlaha nadaafada ee xaafada islii,isagoo xarunta dowlada hoose ee xaafada islii kulan kula qaatay shaqalaha ka shaqeeya nadaafada,waxana uu kala hadlay sidii ay u xoojin lahaayeen nadafada iyo soo celinta bilicda xaafada islii.
Tartamayaasha degmada Baydhabo oo caawa u soo gudbay wareegga saddexaad ee tartanka "SAWIRRO"